Umnyhadala weWoka Kuma - OYOUN
Umnyhadala weWoka Kuma
Cofa ukuze ubhalise: https://www.eventbrite.de/e/woka-kuma-festival-tickets-122975734733
I-Wissmannstrasse 32, 12049 Berlin
EBerlin, eBerlin, DE, 12049
Umbhiyozo weWoka Kuma 2020 @ Oyoun
Ubugcisa nenkcubeko evela eBurkina Faso
Kwakhona kulo nyaka sifuna ukuseta umnyhadala, ngokuhambelana nazo zonke iimeko zecorona, apho inkcubeko kunye notshintshiselwano lwaseBurkinabe ziphambili. I-Woka Kuma Deutschland eV ngokusebenzisana ne-Oyoun ikumemela ngokuhlwa ngengxoxo, ukutshintshiselana, ikhonsathi kunye nomculo e-Oyoun ngo-Okthobha 31.10.20, XNUMX!
18.30pm - 20.00pm:
Ingxoxo yomsitho ngesihloko esithi "Indima yabadlali benkcubeko ekwakheni uxolo" - ukutshintshiselana ngamava kunye neendlela ezivela eBurkina Faso naseJamani
U-Isabella Mamatis, igcisa kunye nomsebenzi wezenkcubeko, usihlalo wombutho we-Lange Tafel eV
UKandy Guira, imvumi kunye nemvumi, waseBurkina Faso, ilungu leqela Amazones d'Afrique
Ukungena simahla! Lo msitho uxhaswa ngemali yiOfisi kaRhulumente yeNtsebenziswano kuPhuhliso
Ukusuka nge-20 pm: ukwamkelwa kunye ne-buffet yase-Afrika kunye ne-bar @ be'kech
Ukususela nge-21.00 p.m.
Ikhonsathi 1 “Usapho lweeNkcubeko eziNika iNkcubeko”: UAsphalt Djelis, abathathu basithimba basiwe kwizandi eziluncedo, njengokuba “bantwana boxolelwaniso” sifumana uhambo ngomculo kuzo zonke iinkalo zalo ngokusebenzisa iindlela ezintsha zovakalelo.
Ikhonsathi 2 : UKandy Guira: Imvelaphi yakhe isuka eBurkina Faso, uKandy Guira uyachukumisa ngelizwi lakhe elinamandla, elinamandla. Kwiziqwenga zakhe udibanisa umculo wesiNtu nowale mihla waseBurkinabe eMoor kunye naseFrance kwaye ubambisene nabazobi abaphambili abanjengoManu Dibango kunye no-Oumou Sangaré njengenxalenye yomsebenzi wakhe. Eqongeni nakumculo wabo, izingqisho kunye neengoma zeAfropop zivakala kunye nezandi zombane njengolungiselelo oluvuselelayo.
UFaso Orkestra: Iqela eliqukethe izixhobo zemveli zaseNtshona ye-Djembé, iBalafon kunye neDundun likuvumela ukuba uve isandi somculo ovela eBurkina Faso. Iimvumi zaseBurkinabe ezivela kwamanye amazwe, zonke ezidlale kumaqela angenakubalwa kunye neeprojekthi ngokwazo, ngoku zisibonisa izingqisho kunye neengoma ezivela eBurkina Faso (Djah Barro, Petit Solo Diabaté, Massa Démbélé) kwi-Woka Kuma Festival.
Ukwamkelwa: i-15 euro
Umnyhadala wonke uxhomekeke kwimigaqo yangoku ye-corona, sicela zonke iindwendwe kunye namagcisa ukuba anike ingqalelo, siya kwenza konke okusemandleni ukuthobela amanyathelo afanelekileyo ukuthobela ucoceko ngokhuseleko.
Oyoun - iWissmannstrasse 32, 12049 eBerlin
Iinkcukacha ezithe vetshe :
2020-10-20T09:43:15+00:00Oktobha 20th, 2020|